မမရယ်။ S၇စဆိူတော့ သိပ်ဈေးကြီးတယ်ထင်တယ်။ ဆန္ဒရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုတော့ မတားလိုပါ၊ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေဟာ imagineသက်သက်ပါ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ တစ်ကယ့်အရာရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို ၀ယ်ပြီးဆင်မြန်းလိုက်စမ်းပါ ဘယ်လောက်တင့်တယ်မလဲစဉ်းစားသာကြည့်တော့လေ။ ၀တ်စုံလှလှလေးနဲ့ မအင်ကြင်းကို သူငယ်ချင်းတွေက မြင်ချင်တွေ့ချင်ကြမှာပါ။
ဟွန်း.. မနာလိုဘူး.. :(
ကိုဏီးကတော့ ရှိုးမှာဆိုတာတွေကို အိမ်မှာနားထောင်ရတာလောက် မကြိုက်တတ်ဘူးဗျ...။ နောက်ပြီး
ကိုဏီးကတော့ ကိုကြီးငဲကို အကြိုက်ဆုံး....။
သီချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာ စည်းကမ်းမရှိဘူးလို့ မြင်မိနေတတ်တာ...။
ပရိုဂျူဆာက ငွေပေးပြီးသူနဲ့လိုက်မယ့် သီချင်းတွေဆိုခိုင်းတိုင်း ဆိုနေတဲ့သူလို့မြင်တာပဲ...။
ညည်းက သူများတွေမနာလိုအောင် ချစ်သူများနေ့အကြောင်းရေးနေပြန်ပြီ..
ရေးတော့လဲ အစောတုန်းကတော့ ဈေးကြီးတယ်လေးဘာလေးနဲ့
နောက်ဆုံးတော့ မနေနိုင်ဘဲ ရောက်သွားတာဘဲ..
ကိုယ်စိတ်ထဲမှာ လုပ်ချင်ရာကို လုပ်ခွင့်ရလိုက်ရင်လဲ ပိုက်ဆံဆိုတာ
ချောကလက် လက်ဆောင်လေးမှမရ.. ပန်းလေးတစ်ပွင့်တောင် ပေးမဲ့သူမရှိတဲ့ ငါ့ညီမကို သနားလိုက်တာ.. ခိခိ :)
သွားချင်တယ် အိမ်နဲ့ နီးနီးလေပဲ ရှိုးလုပ်မှာက ...
ပိုက်ပိုက်မရှိလို့ အိမ်မှာပဲ နေတော့မယ် ... အဟီး...
အတူတူပဲဗျို့ ... သူတို့ကိုကြိုက်တာ.. ဟိုတနေ့ကတောင် ချစ်စမ်းမောင်နဲ့ ခရမ်းတို့ကို တွေ့လိုက်ရသေးတယ်... သူတို့ တီးချက်တွေကိုလည်း ကြိုက်တယ်.. ပြောပြရင် IC အဖွဲ့ဆိုတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ မရိုးမရွကို ဖြစ်လာတာပဲ ...
သူတို့ကိုကြိုက်ပါတယ်ဗျာ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အောင်မြင်မှုမှာ တေးရေးဆရာတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ နဲ့ IC Player တွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေကလည်း အဓိကပါဝင်တယ်ထင်ပါ အမရဲ့ပို့ထဲရေးသားထားတဲ့ စာကြောင်းတွေကလည်း ဒီတေးရေးဆရာတွေ ရေးသားခဲ့ကြတာတွေဆိုတော့ သူတို့အကြောင်းတွေလည်း ထည့်ရေးပေးရင် တစ်စုံတစ်ရာ ပိုပြည့်စုံလိမ့်မယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်
IC အဖွဲ့ပုံလေးကို ကူးယူသွားပါတယ် မဂျင်းဂျင်း :P
ချစ်သူများနေ့မှာ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အဆိုတော်တွေရဲ့သီချင်းနားထောင်ရမှာမို့ ချော့ကလက်နဲ့တောင် မလဲနိုင်ဘူးနဲ့တူတယ်နော်..
ရှိုးပွဲမကြည့်ရတာကြာပြီ။ ဒီကိုထွက်လာကတည်းကပဲ။ ရှိုးပွဲသွားတာက သီချင်းနားထောင်ချင်တာထက် ပျော်ချင်တာ..စိတ်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ချင်တာ..Stress လျှော့ချင်တာ။ သီချင်းက ရှိုးပွဲမှာ နားထောင်ရတာ ဖီးလ်မလာဘူး။ ဒါပေမဲ့ ခုနကပြောသလိုပေါ့။ ရှိုးပွဲဆို အမြဲရောက်တယ်။
မနှစ်က ငါတို့အတူကြည့်ခဲ့တဲ့ IC Show နဲ့အတူ ငါ့ကိုရော..သတိရရဲ့လား.......
မောင်နှမတွေအားလုံးရဲ့ ကွန်မန့်လေးတွေကို အရမ်းနောက်ကျမှ publish လုပ်ရတဲ့အတွက် အနူးအညွှတ်တောင်းပန်ပါတယ်။ အခြေအနေကတော့ sidebar မှာတင်ထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ဒီနေ့တော့ မေးလ်စစ်ချင်လွန်းလို့ မနေနိုင်တော့ဘဲ McDonald's ဆိုင်မှာ လာဖွင့်ပြီးစစ်လိုက်ရတာပါ။ ညစ်တယ် တကယ် :(((
မောင်နှမတွေ အားလုံးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်လျက်
ဒီပွဲမှာလည်း သူဆိုချင်ဆိုမှာ...ငါကျန်ခဲ့လို့ ဖြစ်ပါ့မလား...။
သနားတယ် ညီမ အင်ကြင်း ရေ..
ကိုမျိုးကြီးနဲ့ ကိုဝိုင်ဝိုင်းပါ။ :)) အင်းကြင် ရှိုးပွဲမှာ သီချင်းတွေလိုက်ဆိုရလို့ အသံနာနေပြီလားဝေ့
သွားကြည့်ပြီး ပြန်ကို မလာတော့ဘူး။ ကြည့်ရတာ IC နဲ့များ ပါသွားလား မသိဘူးနော်။း))
အသံကလည်း မထွက်တော့ဘူးတဲ့ .. ငါ့ညီမလေး ဘယ်လောက်တောင် သောင်းကျန်းခဲ့လဲ မသိ...း)
သွားကြည့်တာ ကောင်းလား ဂျင်းရေ..ပျော်ရွှင်ပါစေ..။
ဘယ်ပျောက်နေတာလည်း ဘာတွေဖြစ်နေတာလည်း ဆီပုံးလည်း မရှိတော့ ဆက်သွယ်ရခက်နေပြီ
ချောကလက် နဲ့ မုံလေး ကကောင်းတယ် ကျေးဇူး
အမ်........ ဘယ်မလဲ? ပိုစ့်အသစ်တင်တယ်ဆိုလို့ ပြေးလာတာလေ..။ တွေ့ဘူးနော်.... လာညာတယ်နော်. ဟွန့် ကောင်မလေး.... တုတ်ကောက်ခဲ့.။
အဲ.......မှားလို့ ညီမလေးရေ... ဆောတီးနော်.. အာဘွားး)
မမပိုစ့်အသစ်လေး တင်ပြီးပြီ သားလေးကို လွမ်းလို့...
တကယ်ဆို အမျိုးသားက အမ IC ကြိုက်မှန်းသိလို့ လက်မှတ်၂ စောင် ဝယ်ပြီးသား...ဒါပေမဲ့ အမတို့ အရွယ်က စကားပြောလာပြီလေ...စင်ကာပူရောက်မှ IC Show လွတ်တာ ၂ခါရှိပြီ ....မနှစ်ကလည်း သီလရှင် ဝတ်ဖြစ်လို့ မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး...ဒီနှစ်လည်း တရားစခန်း ဝင်ဖြစ်တာနဲ့.....၊ ...အမလည်း ညီမလိုပါပဲ ကြည့်ရင် အဲဒီနေ့ အတွက် အမရဲ့စိတ်ကို သူတို့အတွက် ပေးပြီးကို အပီခံစားတတ်တာမျိုး.... ညီမ အင်ကြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင် ရူးသွပ်မှုကို ထပ်တူ ခံစားနိူင်ပါရဲ့
ဒီစာမျက်နှာ၁၀၅ သီချင်းက ရုပ်ရှင် VDO ဖြစ်တော့မှာ တစ်ဝကြီးနားထောင်ပြီးကြည့်ပေါ့၊
အမ နေကောင်းကျမ္မာကြောင်းကို သိလိုက်ရတဲ့အတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။
ဒီပို့စ်လေးကို နောက်တစ်ခေါက် ထပ်လာဖတ်တယ်။ အစကတော့ ဖတ်ပြီးရင် ဒီတိုင်းပြန်သွားမလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ရှာရှည်တဲ့ အကျင့်က ကျနော့်ကိုဆွဲထားတယ် ကျနော့်အမ မအင်ကြင်းက သဘောကောင်းလောက်ပါတယ် စိတ်မဆိုးလောက်ပါဘူး နည်းနည်းလောက် ကလိသွားအုန်းမှ ဆိုပြီး commentရေးဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။
အေးလေ... လူ့သဘော မနောတွေက မပြောနဲ့ဆို ပြောချင်တယ်၊ မထိရဆိုရင် နည်းနည်းလောက် ခိုးတို့ရမှ ကျေနပ်တတ်ကြတယ်။
အခုလည်း တကယ်လို့ အမက မသွားတော့ပါဘူးလို့ ဆိုခဲ့ရင် ကျနော်က အမရယ် သွားလိုက်ပါအုန်းလို့ပြောမိမှာ :D ။ ခုတော့ သွားအုန်းမှာလို့ အမပြောလာတော့ တားချင်စိတ်ပေါ်လာတယ် သွားနဲ့အုန်း :P ။
ဂျင်းရေ..စီဘောက်ကြီး ဖြုတ်ထားတော့ ဘယ်လို လာအော်ရပါ့ ကွယ်။
ဂျင်းစိတ်ပူတဲ့ အတွက် ဆော်တီးပါပဲကွယ်..။
cbox မတွေ့လို့ ဒီမှာပဲရေးခဲ့တယ်နော်.. စာလာဖတ်သွားကြောင်းပါ။ ထမီလေးတွေပေါနေလည်း တားတား ချစ်သူလေးကို အလှူလက်ဖက်နဲ့ မျက်နှာလုပ်ချင်လို့ တစ်ထည်လောက် လှမ်းပီး ၀ဲနိုင်ပါတယ်.. အဟီး... ရှိုးပွဲတွေတော့ ကျနော်က သိပ်မကြိုက်တော့ တော်ရုံကြည့်ခဲ့တယ်ဗျ.. အိပ်တော့မယ်နော်.. တာ့တာ့